IKHITSHI LASECAPE COD (ISIKHOKELO SOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Ikhitshi laseCape Cod (Isikhokelo soYilo)
Apha sabelana ngesikhokelo sokuyilwa kwekhitshi laseCape Cod kubandakanya uyilo kunye nemibono yesitayile yokujonga ikhaya lakho.
Ikhitshi laseKapa leCod elivela kwiindlela zekotishi ezenziwe ukumelana nemozulu yeNew England. Kuba ugxininiso lwalungaphandle kwendlu kunye nendlela eyayibamba ngayo, izinto zangaphakathi zazilula ngokulula kuyilo. Kule nqaku siza kubelana ngokuhlaziywa kunye nokulungiswa kweengcamango zekhitshi laseCape Cod.
Yintoni ikhitshi laseCape Cod?
ICape Cod Kitchen igqibile
Uhlobo lwekhitshi laseCape Cod
Iitafile zekhitshi zohlobo lweCape Cod
Iingcamango zeCape Cod zeKhitshi zokuLungisa (ungayijonga njani)
Inguqulelo yanamhlanje yale ndlela ibandakanya ikhitshi eliqhelekileyo eligcinwa likhanya ngombala wekhabhathi. Uyilo ngokwesiqhelo lunesicwangciso esivulekileyo sokutya kwikhawuntara okanye kwisiqithi. Isiqithi siqhelekile kwiikhikhowudi zesitayile seCape Cod. Oku kukuphelisa isidingo segumbi lokutyela ngokupheleleyo, ngokuvumela abantu ukuba batye kwindawo yekhitshi.
Kuhlala kukho enkulu ifestile ngaphezulu kwesinki ukunika ikhitshi ukukhanya kunye nokuziva okukhulu, njengoko zihlala zingabanzi kakhulu.
ukuba wenzeni emva komtshato
Ngokwesiqhelo, isitayile sidibanisa ukutyibilika komthi, nangona ayisiyomfuneko ukulungelelanisa isitayile. Bahlala bebonisa ukunxiba kwayo kwaye bezakhiwe ngakumbi ngesandla, ke bonisa ukungafezeki kumgangatho, kodwa baqinisekile babenolwakhiwo olomeleleyo. Inkuni yayihlala ikhaphukhaphu ukwenza ikhitshi libonakale likhulu.
Ukubumba kwiikhabhathi kwakuyimbonakalo, kwaye kuhlala kujongeka ngathi kwenziwe ngesandla. Kukho isithsaba sokubumba kunye nokusika okutyhutyha ikhaya ukuze lenze ukuba lahluke kwaye lisebenze kulo. Ngamanye amaxesha iingcango zekhabhinethi ziya kuba neepaneli zeklasi kunye neglasi ukubonisa iiglasi zokuhombisa ngaphakathi kwiikhabhathi.
Izikimu zemibala yesimbo seCap Cod zihlala zikhanya, zinomoya kwaye zinxweme, ngenxa yokufuphi emanzini rhoqo. Sebenzisa i-beige, abamhlophe, i-blues kunye nokukhanya kwe-yellows eluhlaza kungcono kuyilo lwekapa yekhitshi yoyilo. Kunokubakho ezimbalwa ezimnyama ezixubeneyo ukongeza umahluko kuyilo. Bona Okuninzi Izimvo zasekhitshini lolwandle Apha.
Ikhitshi elinesiqithi sebhodi yeebhondi kunye nekhabhathi yesitayile sikaShaker.
Kwiinguqulelo ezichanekileyo zembali zekhitshi laseCape Cod kugxilwe ngokukodwa kwiindawo zomlilo nasezitovu, kuba zezona zinto zigcina indlu ishushu, kwaye yindlela ekuphekwe ngayo yonke into emakhayeni. Kuyilo lwanamhlanje akudingeki ukuba lujolise kuyo, kodwa isenokuba yinto yokuhombisa.
kuba nje izipho zomyeni
Isitayile seCape Cod, kule mihla sisetyenziselwa iiholide okanye amakhaya asehlotyeni, azibolekayo kwisitayile semibala ekhanyayo, kunye neenyawo ezincinci. Amakhaya okuphumla abamba isidlo sangokuhlwa sosapho kunye nezinto ezisisigxina.
Imiphezulu yeetafile esetyenzisiweyo yasekhitshini yekhitshi yesitayile iyahluka ngokuxhomekeka kukhetho lwakho. Rhoqo, imiphezulu yeetafile ifumaneka kwi-quartz, kwi-granite, kwi-Corian okanye kwibhlokhi yeenkuni. Ukuqwalasela i-countertop yeenkuni kunye neekhabhinethi ezimhlophe zifanelekileyo kule ndlela, njengoko into yendalo ikhona ngaphandle kokugqithisa indawo. Izixhobo zokubala iinkuni zingasetyenziselwa isiqithi sendawo, kunye neetafile eziphambili ezahlukeneyo kwintsalela yolwakhiwo lwekhitshi.
Ngamanye amaxesha i-countertop emnyama eyahlukileyo ingaba yinto yokubamba iso okanye umbala okhanyayo ukudibanisa kakuhle kunye nendawo yonke ngokuxhomekeke kwinto yokukhethwa komgangatho kunye nekhabhinethi. Olu hlobo alufuni imibala emininzi emnyama ekhoyo.
Isitayile sihlala si-ode elwandle, kunye nabathengisi bendawo abahlala bebonisa ulwandle kunye nolwandle olukhethiweyo olukhethiweyo lwee-countertops, i-backsplashes kunye nezinye iintlobo zeetayile ezinokufuneka ekhitshini.
Inyathelo lokuqala lokujonga ikhitshi lesitayile sasekapa kukuyivula. Elinye lawona macandelo abaluleke kakhulu kwesi sitayile kukuba ikhitshi livulekile kwaye linomoya, ngelixa lisenokuba lincinci ngesiqhelo alinakuziva lizivaxiwe, kufuneka liqaqambe kwaye livuleke. Eli khitshi kufuneka linxibelelane negumbi lokutyela okanye libe negumbi lokutyela ngokuxhomekeke kwindawo kunye neemfuno zomsebenzi.
Inyathelo lesibini lokufumana eliphupha ikapa lekhitshi kukuthenga ipeyinti enkulu emhlophe. Gquma naziphi na iipurple okanye iiorenji obukade unazo ekhayeni ngaphambili kuba lixesha labelungu, nabefundisi. Iphalethi yemibala yekhitshi yesitayile se-cape yimibala engaselwandle, kubandakanya i-beige, abamhlophe kunye neblues ekhanyayo, imifuno kunye nobomvu.
amakhonkco omtshato we-camo aphantsi kuye kunye naye
Inyathelo lesithathu kwelo khitshi laseKapa kukuthenga ikhabhathi emhlophe. Olu lolunye lweyona mibala ithandwayo kwikhabhathi kwaye iyawulungela umxholo ngokugqibeleleyo. Oku kunika ukhetho lokongeza izinto zendalo kumgangatho waphantsi okanye nakwiitafile. Ezi nekhabhathi kufuneka nazo zibe nohlobo oluthile lweenkcukacha kubo. Ngokwembali, izindlu zekhowudi zekapa zinezinto ezininzi zokuhombisa kunye neepaneli zeglasi.
Inyathelo lesine ukuba unqwenela ukugqiba ngokongeza ulwandle okanye imixholo yolwandle kunye nezinto zokuhombisa. Oku kuya kunceda ukudala indawo efanelekileyo. Icebo kukungahambeli ngaphaya kokuhombisa, kodwa khetha amaqhekeza ambalwa anokuzomeleza ngaphandle kokungxala okanye ukitschy.
Ukuzibandakanya kuyilo kuya kuzisa umbono we-cape cod ebomini. Nokuba ukongeza ukungqinelana kwesithsaba kwisilingi kunokwenza umahluko omkhulu kwinkangeleko.
Okokugqibela kwinyathelo lesihlanu, khetha ukuba kulula ukusebenzisa izixhobo zekhompyutha. Enye yeempawu eziphambili zekhaya lesitayile sasekapa kukuba iyasebenza. Akukho zikhabhathi zingafikelelekiyo okanye izinto ezingenakusetyenziswa, kuba indawo incinci kakhulu kusisiyatha ukufaka into ngokubukeka.
Ukuyila ngakumbi jonga igalari yethu ye iikhitshi ezineekhabhathi ezimhlophe .
Isipho seminyaka engama-40 somyeni
Izambatho ezinxitywayo zondwendwe lomtshato
iikhitshi zekhitshi zekhitshi
Kufuneka zide kangakanani izifungo
Katie maloney isicakakazi sembeko